နီဂတာစီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်စရာများ - Best of Japan
Pocket Wifi vs. SIM ကဒ်
ငလျင် & မီးတောင်
ဂျပန် - ဆက်စပ်ဆိုဒ်များ
သဘာဝကကျွန်တော်တို့ကို Mujo သင်ပေးသည်
ဂျပန်၌နွေ ဦး ဝတ်ဆင်
ဆောင်း ဦး ရာသီဂျပန်ဝတ်ဆင်
ဂျပန် Hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း
ဓါတ်ပုံများ - ကလေးများ
ဓါတ်ပုံများ - ကီမိုနို
ဓါတ်ပုံများ - ဝါးယဉ်ကျေးမှု
ဓါတ်ပုံများ - ဂျပန်တွင်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်း
ဓါတ်ပုံများ - အာကီဟာဘာရာ
ဓါတ်ပုံများ - MariCAR
ဓာတ်ပုံများ - Kei ကားများ
ဓါတ်ပုံများ - Charaben
စားနပ်ရိက္ခာ & သောက်
ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်
ဆာမူရိုင်း & Ninja
ဓါတ်ပုံများ - San'in
ဓါတ်ပုံများ - ကုန်းတွင်းပင်လယ်
Naeba နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၊ နီဂတာ၊ ဂျပန် = Adobe Stock
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးခရီးသွား D ည့်လမ်းညွှန်များ! ဆောင်းရာသီ၊ နွေ၊ နွေ၊ ဆောင်း၊ >
Chubu တိုင်းဒေသကြီး! စီရင်စု ၁၀ ခုတွင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများ >
နီအိုဂါတာစီရင်စုကိုဂျပန်ပင်လယ်နှင့်တွေ့ရသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်ဂျပန်ပင်လယ်မှစိုစွတ်သောတိမ်များလာပြီးတောင်များကိုထိမှန်ပြီးနှင်းများကျစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နီဂတ်တာစီရင်စု၏တောင်ဘက်ခြမ်းသည်နှင်းများထူထပ်သောဒေသဖြစ်သည်။ နီအိုဂါတာစီရင်စု၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်နီဘား၊ ဂျီယက်ဆူကိုကာဆိုင်းစသည့်skiရာမနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများရှိသည်။ Joetsu Shinkansen ကတိုကျိုဘူတာကနေဒီကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်ပါတယ်။ နှင်းအရည်သည် Hakuba နှင့် Niseko တို့ထက်အနည်းငယ်ဆည်ဖြစ်သည်။
လူများသည် Snow Yuzawa နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၊ Nigata စီရင်စု၊ ဂျပန် = Shutterstock တွင်နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
သို့ပြန်သွားရန် "Chubu ဒေသ၏အကောင်းဆုံး"
ဘွန် KUROSAWA ကျွန်ုပ်သည် Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လွတ်လပ်သောဝဘ်စာရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ NIKKEI မှာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ငါ့ကိုဂျပန်နှင့်ပတ်သက်သောပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ ဤဆောင်းပါးတွင် အသေးစိတ်ကို။
Toyama စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Shizuoka Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Yamanashi စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Miyazaki Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Tottori စီရင်စု! အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Mie စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
Nagano Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Kumamoto စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Nagasaki Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
Gifu စီရင်စု: အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ
အားလုံးခရီးကိုစီစဉ်ပါ ဘယ်အချိန်မှာသွားရမလဲ (16) အဖြစ်အပျက်ပြက္ခဒိန် (15) ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတု (65) အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်များ (၂၉) တည်းခိုခန်း (3) လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များ (2) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (11) အဝတ်အထည်များ (6) ဘာသာစကား (1) ငွေကြေး (1) အချိန်ကွာခြားချက် (1) အင်တာနက် (၁) ကယ်ဆယ်ရေး (3) သင်ယူသည် (83) ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု (71) သမိုင်း (4) ဆက်စပ်ဆိုဒ်များ (7)
အားလုံးဒေသများ Hokkaido (61) ဟွန်ရှူး: တိုကူ (၃၈) Aomori စီရင်စု (၇) အာကီတာစီရင်စု (၇) အိုင်ဝါစီရင်စု (၃) Miyagi စီရင်စု (5) ယာမာဂါတာစီရင်စု (5) ဖူကူရှီးမားစီရင်စု (၈) ဟွန်ရှူး: ကန်တို (၇၆) တိုကျို (31) တိုကျိုမက်ထရိုပိုလစ်တန် (၅) ကန်နာဂါစီရင်စု (၈) ချီဘာစီရင်စု (၄) ဥယျာဉ်စီရင်စု (၂) အီဘရာကီစီရင်စု (၇) ဂွန်မားစီရင်စု (၅) တိုချီဂျီစီရင်စု (၇) ဟွန်ရှူး: ချူဘူ (၆၀) Shizuoka စီရင်စု (၅) ရာမရှီစီရင်စု (၁၀) Nagano စီရင်စု (15) နီဂါတာစီရင်စု (၃) Toyama စီရင်စု (၆) Ishikawa စီရင်စု (၇) ဖူကူခရိုင် (၃) Gifu စီရင်စု (၁၀) Aichi စီရင်စု (၃) မီစီရင်စု (၅) ဟွန်ရှူး: ကန်ဆိုင်း (၇၆) ရှီဂါစီရင်စု (၅) ကျိုတို (33) ကျိုတိုစီရင်စု (2) နာရာစီရင်စု (၆) ဝါကယာမစီရင်စု (၄) အိုဆာကာ (7) အိုဆာကာစီရင်စု (၄) Hyogo စီရင်စု (၈) ဟွန်ရှူး: ချူးကူ (၂၈) အိုကေယာမစီရင်စု (၅) ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု (၁၀) ယာမာဂူချီစီရင်စု (၂) တိုတိုရီစီရင်စု (၃) ရှိမန်းစီရင်စု (၆) သိုက်ကို (17) တိုကိုရှီမာစီရင်စု (၄) ကဂါဝါစီရင်စု (၃) Ehime စီရင်စု (3) ကိုချီခရိုင် (၁) ကျူရှူ (36) ဖူကူကိုစီရင်စု (၄) စစ်ကိုင်းစီရင်စု (၁) Nagasaki စီရင်စု (7) Kumamoto စီရင်စု (၈) အိုိုင်တာစီရင်စု (၈) မီယာဇာကီစီရင်စု (၃) ကာဂိုရှီမာစီရင်စု (၃) အိုကီနာဝါစီရင်စု (၁၁)
စိတ်ဝင်စားမှုအားလုံး လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များ (2) ဖက်ရှင် (8) စျေးဝယ်ခြင်း (14) ဂျပန်အစားအစာများ (15) နှင်းပွိုင့်များ (73) ချယ်ရီပွင့်များ (32) ပန်းများ (32) ဂျပန်ဥယျာဉ်များ (15) ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်များ (52) Onsen (22) တိရစ္ဆာန်နှင့်ငါးများ (10) တောင်တက် (64) သာယာလှပစီးနင်းခြင်း (29) အပန်းဖြေပန်းခြံများ (6) ညအမြင်များနှင့်အလင်းရောင်များ (39) ပွဲတော်များ (23) ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ (50) ရဲတိုက်များ (30) သမိုင်းဝင်နေရာများ (၄၉) ဆာမူရိုင်းနှင့်နိင်ဂျာ (11) ရိုးရာလက်မှုပညာ (5) ပြတိုက် (8) မန်ဂါနှင့် Anime (7) ကမ်းခြေများ (10) အားကစား (14) စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး (8) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (12)
အားလုံးရာသီ ဆောင်းရာသီ (51) ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) နွေ ဦး (45) မတ်လ (၁၂) ပြီလ (၁၆) မေလ (13) နွေရာသီ (37) ဇွန် (၁၀) ဇူလိုင်လ (၁၅) သြဂုတ်လ (၁၅) ဆောင်း ဦး (၄၄) စက်တင်ဘာ (၁၆) အောက်တိုဘာ (16) နိုဝင်ဘာလ (၁၅)
အားလုံး Tags: Abashiri (1) နီကိုက (1) အိဇ်ဘုန်းတော်ကြီး (၁) Shiretoko (14) Daisetsuzan (5) Asahiyama တိရစ္ဆာန်ရုံ (1) Furano (17) Biei (19) Sapporo (22) အိုတာရူ (14) နီစီကို (7) Hakodate (16) Aomori (3) Oirase စီး (3) ချူဆန်ဂျီဘုရားကျောင်း (၂) ကကူနာဒတ် (2) တင်ဒါ (3) Ginzan Onsen (4) ဇို (5) Aizu-Wakamatsu (2) Nikko Tosho-gu (4) Hitachi ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းခြံ (4) Ashikaga ပန်းခြံ (3) အိုး (4) တိုကျိုဒစ္စနေး (1) တိုကျိုမိုးမျှော်တိုက် (3) အီဒိုတိုကျိုပြတိုက် (၂) Asakusa (3) Sensoji ဘုရားကျောင်း (3) Ueno (1) တိုကျိုအမျိုးသားပြတိုက် (၂) Akihabara (4) Palaceကရာဇ်နန်းတော် (2) ဂင်ဇာ (3) Odaiba (2) တိုကျိုတာဝါ (3) Shibuya (2) မေဂျီဂျင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၄) ရှင်ဂျုကု (4) Shinjuku Gyoen ဥယျာဉ် (၂) တောင် တakao (3) Yokohama (2) Kamakura (6) ဟာဆီစာဘုရားကျောင်း (1) osh နော့ရှီမာ (3) Hakone (4) Hakone လေပြင်ပြတိုက် (၁) တောင် ဖူဂျီ (13) ဖူဂျီ -Q Highland (2) ကန်ကန်ဂူချီကို (၂) Jigokudani နှင်းမျောက်ဥယျာဉ် (3) Matsumoto ရဲတိုက် (4) Hakuba (6) Kamikochi (5) တတီယာမာကရူဘို Alpine လမ်းကြောင်း (၆) Takayama (4) Shirakawago (9) ကာနဇာဝါ (5) Kenrokuen ဥယျာဉ် (6) Nabana no Sato (3) အိဇ် Grand Shrine (2) Gion (1) ကင်ကာကူဂျီဘုရားကျောင်း (4) Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း (7) Fushimi Inari-taisha ဘုန်းကြီးကျောင်း (4) Eikando Zenrinji ဘုရားကျောင်း (4) Arashiyama (4) Todaiji ဘုရားကျောင်း (4) နရာပန်းခြံ (4) တောင် Yoshino (4) Koyasan (4) Kumano ကိုဒို (4) ဥမီဒါ (1) အိုဆာကာရဲတိုက် (3) Dotonbori (1) USJ (3) Kaiyukan (1) ကိုဘေး (3) ဟီဂျီရဲတိုက် (4) ဟီရိုရှီးမားငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်ပြတိုက် (၄) Miyajima (10) Izumo Taisha (5) ဖူကူကို (3) Huis Ten Bosch (၁) Nagasaki (3) Kumamoto ရဲတိုက် (2) Aso (5) ဘепပူ (6) Yufuin (3) Takachiho Gorge (3) Sakurajima ကျွန်း (2) Yakushima (2) အိုကီနာဝါ (9)
ရွေးချယ်ပြီးနောက် "Submit" ကိုနှိပ်ပါ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးခရီးသွား D ည့်လမ်းညွှန်များ! ဆောင်းရာသီ၊ နွေ၊ နွေ၊ ဆောင်း၊
ဒီဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နေရာအနှံ့အပြားတွင်မိတ်ဆက်ရန်စာမျက်နှာများရှိသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောခေါင်းစဉ်များကိုမီနူးကြည့်ခြင်းဖြင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာများသို့သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အောက်ပါကိုကြည့်ပါ။ သင်၏စာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါက ...
ကျိုတို! ၂၆ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ - Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji စသဖြင့်
ကျိုတိုသည်ရိုးရာဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအမွေဆက်ခံသောလှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကျိုတိုသို့သွားလျှင်သင်၏ရိုးရာအစဉ်အလာအရဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျိုတိုတွင်အထူးအကြံပြုလိုသည့်ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ ဤစာမျက်နှာသည်ရှည်သော်လည်းသင်ဤစာမျက်နှာကိုဖတ်လျှင် ...
ဟော့ကိုင်းဒို! ၂၁ လူကြိုက်များသောခရီးသွားAreရိယာနှင့်လေဆိပ် ၁၀ ခု
ဟော့ကိုင်းဒိုသည်ဟွန်ရှူးပြီးလျှင်ဂျပန်၏ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြောက်ဘက်အကျဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးစီရင်စုဖြစ်သည်။ ဟော့ကိုင်းဒိုသည်ဂျပန်ရှိအခြားကျွန်းများထက် ပို၍ အေးသည်။ ဂျပန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးမှုကြောင့်ဟော့ကိုင်းဒိုတွင်ကျယ်ပြန့်။ လှပသောသဘောသဘာဝရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်၏အောက်လိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
တိုကျိုရှိအကောင်းဆုံးအရာများ - Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney
တိုကျိုသည်ဂျပန်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်းခေတ်သစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတိုကျိုကိုလာလည်ပါ။ ဤစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တိုကျိုမြို့ရှိလူကြိုက်များသောခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့်ရှုခင်းများကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ ဒီစာမျက်နှာကအရမ်းရှည်တယ် သင်ဤစာမျက်နှာကိုဖတ်လျှင် ...
ဖူဂျီတောင် - ဂျပန်တွင်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ ၁၅ နေရာ!
ဒီစာမျက်နှာမှာတောင်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးရှုထောင့်ကိုငါပြမယ်။ ဖူဂျီ။ တောင် ဖူဂျီသည်အမြင့်ဆုံး ၃၇၇၆ မီတာရှိသောဂျပန်တွင်အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်။ တောင်၏မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြုလုပ်သောရေကန်များရှိပါသည်။ Fuji နှင့်လှည့်ပတ်လှပသောရှုခင်းကိုဖန်တီး။ မင်းကြည့်ချင်ရင် ...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဆီးနှင်းနေရာများ - Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ...
ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာဂျပန်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နှင်းကျနေတဲ့မြင်ကွင်းအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဂျပန်တွင်နှင်းထူထပ်သောနေရာများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဆီးနှင်းနေရာများဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးareasရိယာများကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြခဲ့သည်၊ ငါ share မယ် ...
ဤစာမျက်နှာတွင်လှပသောပန်းပွင့်များနှင့်အတူရှုခင်းများကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာချယ်ရီပွင့်တွေစိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှခရီးသွားများသည်ချယ်ရီပန်းပွင့်များနှင့်ဂျပန်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနိုင်မည့်နေရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ...
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်ဂျပန် Onsen သည်
ဂျပန်သည်မီးတောင်များစွာရှိသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သောကြောင့်မီးတောင်၏ကျောက်တုံးဖြင့် Onsen (ရေပူစမ်း) မှမြေအောက်ရေကိုအပူပေးသည်။ လက်ရှိတွင်ဂျပန်၌ spa 3000ရိယာ ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟုဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့အနက်နိုင်ငံခြားခရီးသွား among ည့်သည်များကြားတွင်ရေပန်းစားသောနေရာများစွာရှိသည်။ တွင် ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးဘုရားကျောင်းများနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ။ Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji စသည်တို့
ဂျပန်၌နတ်ကွန်းနှင့်ဘုရားကျောင်းများစွာရှိသည်။ သင်ထိုနေရာများသို့သွားပါကသင်သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးလန်းဆန်းမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ သင်၏ Instagram တွင်တင်လိုသည့်လှပသောနတ်ကွန်းများနှင့်ဘုရားကျောင်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်၌လူကြိုက်အများဆုံးဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားကျောင်းအချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်ဂျပန်တွင်ရှိသည်။ နွေရာသီအလွန်ပူသည်၊ သို့သော်အပူသည်ထာဝရမတည်ပါ။ အပူချိန်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးသစ်ပင်များပေါ်ရှိအရွက်များသည်အနီရောင်နှင့်အဝါရောင်ဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတော့ခက်ခဲတဲ့ဆောင်းရာသီရောက်လာလိမ့်မယ်။ လူများသည်အအေးဒဏ်ကိုခံရပ်နိုင်ပြီးနွေးထွေးသောနွေ ဦး ပေါက်လာလိမ့်မည်။ ဒီ ...
မူပိုင်ခွင့်© Best of Japan , 2020, All Rights Reserved ။